Horukon-feature sare-u aragto iyada oo loo marayo jidka dejinta
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Horukon-feature sare-u aragto iyada oo loo marayo jidka dejinta
In qabashada Horukon, waxa la sheegay in la dhigay qeybinta. dukaan Pachinko, haddii Uchikome diirada iibka si ay Horukon, iyo si xor ah u xisaabiso heerka hoos u, waxaa loo sheegay in aad loo xakameeyo heshay ka.
gacanta ku heshay waxaa la isugu keenaa afar ka mid ah shantii in shuruudo gaar ah taagan, Haddii aad wakhtigii la ballamay, ayaa la sheegay si aad u nidaamka ah in qoondaysaa Ghanna ah. Sidoo kale, kooxda ay go'aamiyeen Horukon, marka soo saarista Ghanna ah, ROM ee midab ayaa u soo qaado taagan oo xoog leh. midab
saldhigga bilaash ah ama ROM waa xanaaqsan taagan miiska ayaa sheegay in uu jiro wax ka yar tahay in la soo xulay. In
, Kuwa akhriya qabashada Horukon yahay, nooca dhaqanka waxaan jeclaan lahaa in aad eegto waxa ay tahay in ay galeen a-set sare markii aan kacay. Si height
dejinta waqtiga, inta badan opinion sida ugub ah lagu arkay meel u dhow ee miiska Ghanna waa xaqiiqada ah in ay jirto ifafaale ah sida kubad dhex maraya guddida waxaa la nuugo galay bilowgii. Ball in la wado block caadiga ah, isku dayi doonaa in hoos Ochiyo ee la xiriirta soo jiidashada.
dhuftay dhidibkii wakhtigaas, ama hoos-kabashada at xaglo kala duwan ku dhici, adiga ama soo galay bilowgii. In isutagga ayaa la sheegay in this qabashada Horukon, waxa ay noqotay wax la qoondeeyey ee la xidhiidha transformer ah. Marka
Horukon si loo ogaado kooxda ah Ghanna, falimihiisii ??kale ciidamada magnetic, waxay dareemeysaa in ay jirto dareen ah in kubad soo jiidaa. Ka dibna, Toka ay adag tahay si loo yareeyo kubada, aad u kiciyey, sida kubad fiican u dhex-maraa.
sababo this ifafaale sidoo kale dhacda la mid ah sida kor lagu sharaxay sababta uu noqon doono.
iyo, waxa la sheegay in noocyo kala duwan oo ifafaale xitaa marka Ghanna ayaa iman doona miiska aad dhacdaa, opinion ugu badan ee iyaga ka mid ah, in miiska kale oo kooxda ka mid ah, gaari weyn oo daran Atsurichi had iyo jeer waa dhacdaa, waa arrin dhacdaa weecin in. Si height
dejinta waqtiga, halkii waaweyn Ri marka ay dhacdo, waxa la sheegay in laga jari karo halkii celcelis 9 saldhigyada Chang, set sare waqtiga, waxaa sidoo kale waa aragti ah in jaaniska in ay koox la mid ah waa in ay ku guuleysato go'aan Ghanna waa sare.
Intaa waxaa dheer, marka go'aanka kooxda soo socda ayaa la sameeyay, laakiin dadka qaar u iman jiray kubada si ay u bilaabaan ka xun.
iyo meel sare waqtiga Ghanna bakhtiyaa ayaa la sheegay in ay soo noqnoqda meesha, aad bakhtiyaa ka mid ah 4 jeer saacaddiiba waa in la fuliyaa.
ama in ka badan, waa arrin dhacda in ay height Horukon hadda dejinta waqtiga.
Sidaas, waxaan isku dayay in uu soo bandhigo caadiga ugub ah ayaa la sheegay in ay inta badan ka dhacaan lahaa.
Waayo, habka qabashada Horukon iyo dhaqanka, waxa muhiim ah in aad aaminsan tahay oo mid ka mid ah sababtoo ah waxaa jira aragtiyaha. Ka dib markii in, waxaa Sargaal Sare oo keliya qiimaha waayo-aragnimo ee dhaqanka.